Bisto Gravy Granules beef 550G | Nzipu ahia otu ubochi - Lewisham Bisto Gravy Granules Anụ ehi 550G– Ordrs
Bisto Gravy Granules Anụ ehi 550G
Ahh! Mba kachasị amasị.
Mkpụrụ vaịn anyị na-ehicha achịkọta na-eme ka ezinụlọ dịrị n'otu maka nri ụlọ maka ọgbọ. Bisto Gravy Granules bụ ndị na-atọ ụtọ igwe mmadụ wụsara n'elu bangers na Mash na nke zuru oke na anụ Sunday.
Bisto Gravy Granules dị ngwa ma dịkwa mfe ịkwadebe, na-enyere gị aka ịmepụta nri ndị a na-eme n'ụlọ iji nwee ọnụ na ndị enyi na ezinụlọ. Iji mee ka ndị mba ọzọ nwee mmasị na gravy, tinye 4 tii (20g) nke Bisto Gravy Granules n'ime ite na-atụ ihe - maka ụyọkọ gravy na-agbakwunye Bisto Gravy Granules n'oge a. Na-esote, tinye 280ml (1/2 pint) nke mmiri esi mmiri na Bisto Gravy Granules, na-agbasi mbọ ike ma na-aga n'ihu ruo mgbe ị ga-enweta obere gravy. Na-eje ozi ma na-enwe obi ụtọ Bisto gravy!
Ọ bụghị naanị na Bisto Gravy Granules na -emepụta flavoursome na ụtọ na-atọ ụtọ maka oge ezinụlọ na-eri nri, mana ha na abụba na abụba dị obere. Kedu ihe ọzọ, Bisto Gravy Granules dị mma maka ndị anaghị eri anụ.
Na Bisto, anyi ghotara ike isi nri na ezigbo nri ichikota ndi mmadu. Enwere ike iji Bisto Gravy Granules mee nri dị iche iche nke ezinụlọ, site na nri abalị nke izu na-apụ na Sunday Roasts na mkpụmkpụ niile. Gini mere ị ga-eji gbakwunye Bisto Gravy Granules na beef & yabasị? Ma ọ bụ ịkwadebe Bisto Gravy Granules ka ị wụsara ibe?
Iji chọpụta ihe ndị ọzọ gbasara Bisto na ọtụtụ ngwaahịa anyị gaa na http://www.bisto.co.uk/
Settfọdụ idozi ọdịnaya nwere ike ịbụ n'oge njem.
Naanị tinye mmiri esi
Shuga na abụba dị ala
Ngwugwu ngwugwu: 550g
Abụba dị obere